Tanjon’ny Fanontàna 2018: Mitondra ny Feon’ireo Firenena ao Miatrika Fifandonana ao MENA · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2018 18:36 GMT
Fanafihana an'habakabaka tao Sana'a, renivohitr'i Yemen, tamin'ny 11 Mey 2015. Sary nalain'i Ibrahem Qasim (CC BY-SA 2.0).
Nandetika ny firenena ho ao anatin'ny kirizy tsy mbola nisy toa azy amin'ny mahaolona ny ady ao Yemen, izay nipoaka, roa taona mahery lasa izay, nifanandrinan'ny mpikomy Houthi sy ireo hery manohana ny governemantan'ny Filoham-pirenena Abdrabbuh Mansour Hadi. An'arivony ireo olon-tsotra maty sy naratra, an-tapitrisa ireo mety ho tratran'ny tsy fanjariana ara-tsakafo ka mila ny fanampiana amin'ny mahaolona, ary mamono olona iray isa-minitra ny areti-mandoza kôlerà. Nihamafy ilay ady, rehefa nanao fampielezankevitrana zera baomba ho fanohanana ny governemantan'ny Hadi izay eken'izao tontolo tamin'ny volana Martsa 2015, ny tafika mpiaradia tarihan'ny Saodianina, ary nofahanan'ny varotra fitaovam-piadiana Amerikanina, Britanika ary Frantsay.
Lasa fantatra toy ny hoe “ilay ady adino” io ady io, ary ny zava-doza atrehan'ireo mpanao gazety sy ny media ao Yemen no vao mainka hanampy trotraka ny tsy fahampian'ny fanarahan'ny media azy. tamin'ny fotoana tena ilàna indrindra ny feon'ireo mpanao gazety sy media Yemenita no nampanginin'ireo antoko tia ady indray izy ireo: ireo Houthis, ny tafika mpiaradia tarihan'ny Saodiana sy ireo vondrona hafa mandray anjara amin'ilay ady.
Miatrika olana mitovy amin'izany ireo firenena hafa any amin'ny faritra Arabo. Any andrefan'i Sahara, miatrika fandrahonana araka ny lalàna sy fanagadràna mandritra ny fotoana ela ireo media mpikatroka, mitatitra ny fibodoana sy manadihady mandrakitra ireo tsy fanajana ny zon'olombelona ataon'ireo miaramila Marôkanina.
Tratry ny fahirano ny fahalalahana miteny sy ny fahalalahana amin'ny fanaovana gazety any amin'ny ankamaroan'ireo firenena ao amin'ny faritra Arabo. Manasarotra izany ireo ady sy fifandirana misy amin'izao fotoana izao sy ny tontolo feno famoretana — ary indraindray aza tsy afaka manao ny asany sy ny fitaterana ny marina ireo mpanao gazety.
Anampiana izany, satria mitoetra mandritra ny taona maro ary mandritra ny taompolo maro mihitsy aza ireo ady any amin'ny faritra sasany, lasa tsy tohina amin'ny fijaliana sy ireo tantaran'izay tratry ny ady sy ny famoretana intsony ireo mpamaky.
Mba hahatratrarana io tanjona io, hiaraka hiasa akaiky amin'ireo toniandahatsoratra ao amin'ny faritra MENA, i Joey Ayoubaho, sy ny an'ny Lingua Arabo, Lara AlMalakeh aho mba:
Handray / hampiditra feo vaovao hanoratra momba ireo ady any amin'ny firenen'izy ireo araka ny fijeriny manokana, ary momba ny fiantraikan'ny karazana ady tahàka izany amin'ny fiainana andavanandron'ireo iharan'izany.
Hanomboka fiarahamiasa roa miaraka amin'ireoy trano roa mpanao fanontàna na fikambanana avy ao amin'ny faritra.
Efa an-dalana amin'ny fametrahana sahady ny fiarahamiasa amin'ny Tambajotran'ireo Vehivavy Sirianina Mpanao Gazety (SFJN) izahay izao mba hahazoana tantara avy any/momba an'i Siria.
Noho izaho toniandahatsoratry ny Advox ho an'ny faritra MENA, ary eo ambanin'ny fanarahamason'ny talen'ny Advox, hiaraka hiasa amin'ireo mpanoratra vaovao sy ireo fikambanana ireo aho mba hahitako ny sehatry ny fahaizana sy ny traikefa ananan'izy ireo izay mifandray ireo olan'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahazoana vaovao. Efa niresaka tamin'ny SFJN sahady aho momba ny fahafahana miasa aminà tantara 1 na 2 mikasika ny vavy sy lahy ary ny teknolojiaany amin'ny faritra Arabo.
1 Martsa-31 Martsa: Miantso ireo mety hiara-hiasa sy ireo fikambanana (efa amperiny)
Amin'ny volana Martsa: Manomboka fiarahamiasa iray amin'ny Tambajotran'ireo Vehivavy Sirianina Mpanao Gazety (eo an-dalam-panatanterahana)
Alohan'ny 15 Martsa: Mandray mpanoratra iray avy any amin'ireo firenena voatanisa etsy ambony na manombka fiarahamiasa amin'ny fikambanana 1 ka hatramin'ny 2 izay miasa ao amin'ireo firenena voatanisa etsy ambony (efa eo an-dalana amin'ny fanombohana fiarahamiasa miaraka amin'ny SFJN izahay ary efa mifandray amin'ny media mpikatroka mitoetra ao Andrefan'i Sahara ihany koa aho momba ny mety ho fiarahamiasa)
15 Aprily – 30 Aprily: Hanohana ny toniandahatroratra avy any amin'ny faritra MENA mba hampidirana ireo mpanoratra vaovao ho ao amin'ny torolalan'ny GV ary hanome fiahiana ho an'ireo manoratra tantara mifandraika amin'ny ADVOX
Alohan'ny 30 Aprily: Hamoaka lahatsoratra iray farafahakeliny nosoratan'ny mpanoratra na ny fikambanana tsirairay.
1 Mey -31 Mey: Mamoaka tantara roa mifandraika amin'ny advox mikasika ny lahy sy ny vavy ary ny teknôlôjia, ao anatin'ny fiarahamiasa amin'ny SFJN.